युवतीको पीडा- बेहोस बनाएर बलात्कार गरे « Globe Nepal
‘ब्युटी प्याजेन्ट’ का नाममा याैन हिंसा
ति फोटो पत्रकार र कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले तस्बिर खिचे र उनलाई ५ हजार पैसा दिए । फोटो खिचेर उनीहरूले भने कि हामीले ‘ब्युटी प्याजेन्ट’ आयोजना गर्दैछौं । म त्योभन्दा अगाडि पनि ब्युटी प्याजेन्टमा भाग लिइसकेकी थिएँ । त्यसले म राजी भएँ । ब्युटी प्याजेन्टको विनर भइसकेपछि उनलाई ‘सक्सेस पार्टी’ दिने भनियो । उनी तयार भइन् ।
अहिले घटना सार्वजनिक भइसकेपछि माल्भिकाले प्रष्टीकरण दिएकी छिन् । त्यो बेला मलाई कानुनबारेमा थाहा थिएन भन्दै उनले माफी मागेकी छिन् । उनी ६/७ वर्षको हुँदा फिल्ममा अभिनय गरेकी थिइन् । त्यही बेलादेखि उनको सपना थियो- ठूलो भएपछि मोडल हुन्छु, कलाकार हुन्छु । तर, उनको सपना त्यही घटनाले तुहाइदियो ।
‘त्यो समय मलाई यस्तो भयो भने के गर्ने ? कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? थाहा थिएन । अहिले पो थाहा पाएँ । अनि घटना सार्वजनिक गरेकी हुँ,’ उनले भिडियोमा भनेकी छिन् । उनले भिडियोमार्फत भनेकी छिन्, ‘कुनै पनि केटीहरू आफ्नो आमालाई नलगी कहिँ पनि नजानु । यो मेरो अनुरोध मात्र होइन्, बिन्ती पनि हो ।’